San Pedro de Alcántara, pfuma kuCosta del Sol | Absolut Kufamba
Absolut Kufamba | | España
Inowanikwa padhuze nepasi rose Marbella, San Pedro de Alcántara inomiririra yakapesana, ndiko kuti, runyararo rweguta reSpanish. Hwaro hwayo hunenge hwazvino, nekuti hwakazvarwa senzvimbo yekurima iri mumaoko eMarquis del Duero muna 1860, ichive chimwe chemberi nguva yayo.
Parizvino, guta reMalaga rinomiririra dzimba dzaro chena uye nekuve neese masevhisi akajairwa muhuwandu hwevanopfuura zviuru makumi matatu nezvishanu vagari. Nekudaro, kunyangwe hazvo yakavambwa makore zana nemakumi mashanu apfuura, inokupa iwe zvinonakidza zviyeuchidzo uye zvakare yakanaka nharaunda kuti unakirwe nemasikirwo.
1 Chii chaungaona muSan Pedro de Alcántara
1.1 Paleo-yechiKristu basilica yeVega del Mar
1.2 Roman Baths yeLas Bóvedas
1.3 Chechi yeSan Pedro de Alcántara
1.4 Villa yeSan Luis
2 Zvinhu zvekuita muSan Pedro de Alcántara
3 Mamiriro ekunze muSan Pedro de Alcántara
4 Chii chekudya muSan Pedro de Alcántara
Chii chaungaona muSan Pedro de Alcántara
Vagari veMalaga vane nzvimbo zhinji dzaunofanira kushanyira, kubva zvisaririra zvekuchera matongo paleochristian uye roman kune zvivakwa zviri chikamu che maindasitiri ekuvaka nhaka. Uye zvakare zvimwe zvinonakidza zviyeuchidzo.
Paleo-yechiKristu basilica yeVega del Mar
Iwe uchawana zvisaririra izvi pamuromo peRwizi rweGuadalmina, munzvimbo yaipfuura nemugwagwa weRoman Herculean, waibatanidza Cádiz uye Cartagena. Parizvino, chirongwa chechechi hachina kuchengetedzwa, zvichiratidza muviri wematombo matatu uye maviri akatarisana apse. Yakavakwa pakati pezana ramakore rechishanu nerechitanhatu AD uye inofungidzirwa kuve yaive chikamu cheguta re Cilnian, wekuvapo, zvisinei, hapana humbowo.
Paive zvakare necropolis ipapo. Kune rimwe divi, iyo yose nhaka yakawanikwa pamwe chete nezvasara izvi (mabwe emakuva, midziyo, zvishongo uye zvinhu zvemakuva) zviri muNational Archaeological Museum yeMadrid. Basilica iri Nhoroondo yezvakaitika kare kubva ku1931.
Roman Baths yeLas Bóvedas
Unogona kutora mukana wekuvashanyira kana iwe uchienda kuchechi, nekuti ivo vangori mazana mashanu emamita kubva pairi. Icho chivakwa chakaumbwa, chine dzimba sere chakakomberedza imba yepakati, uye chakanyorwa pakati pezana ramakore rechipiri nerechitatu mushure maKristu.
Yakavakwa mukongiri yakasimba saka yakatsungirira kuyedzwa kwenguva zvakaringana. Uye zvakare, ine peculiarity yekuti masiling ayo akaiswa. Kubva 1936 yanga iri National Monument uye kubvira 2007 Asset Yetsika Kufarira.
Kune rimwe divi, padyo nezvitubu zvinopisa uchawana bhikoni shongwe Yakavakwa muzana ramakore regumi nenhanhatu sechikamu cheshongwe dzinotarisa kusvika kwevapambi vanobva kuNorth Africa kumahombekombe. Kureba kwayo kuri gumi nematatu metres uye hwaro hwayo hune hupamhi hwemasere.
Chechi yeSan Pedro de Alcántara
Yakavhurwa muna 1869, inopindura maitiro echikoloni uye ine yakasarudzika façade ine chishongo chakaumbwa-shongwe inoyeuchidza iyo Portichuelo de Antequera. Ine chirongwa chechechi uye ndechimwe chezvivakwa zvishoma zvinosara kubva kunzvimbo yekutanga yekurima yakapa huwandu hwevanhu varipo.
Villa yeSan Luis
Kuvakwa kwaro kwakatanga kubva muna 1887 semusha wemhuri yeCuadra Raoul, iyo yakawana muridzi wekoloni muna 1874. Inoda kuziva nekuti haina chekuita nemaitiro eAndalusian. Asi, inopindura french yenguva iyoyo. Iyo ine rectangular pasi chirongwa uye matatu akakwirira. Denga rakabvarurwa uye pasi paro pane matatu asina kushongedzwa madhiri. Iwe unozowana ichi chivakwa zviri nyore sezvo iko zvino chave chigaro cheHofisi yaMeya.
Kunze kwezvakasara zvekuchera matongo izvo zvatakatsanangurira kwauri, ichi chingangodaro chiri chivakwa chekare muSan Pedro de Alcántara, sezvo yakavakwa pamberi pekutangwa kwekoloni. Kunyanya, iri kubva muna 1823 uye basa rayo raive rekugadzira shuga. Nekudaro, yakazove yakatsaurirwa kuna purazi-modhi, chikoro chevatungamiriri vezvekurima icho chaive piyona muSpain yese.
Iko kunofanira kutaurwa kuti munzvimbo ino kwakarimwa shuga kwemazana emakore kubvira iri imwe yenzvimbo shoma muEurope uko kwakakodzera mamiriro kuti chirimwa ichi chikure. Nhasi uchawana nzvimbo yemagariro muchivako ichi.
Sezvo shuga yaive yakawanda munzvimbo iyi, iyo koloni yakavamba iyi distillery muna 1871. Kutaura zvazviri, yaigadzira bhurandi kubva pamanyuko echinhu ichocho. Icho chivakwa chine rectangular nave uye chirefu chirefu. Asi, pamusoro pezvose, its facade, Yakashongedzwa nemuganhu mumatiles machena uye ebhuruu pamwe nezvimwe zvekusununguka.
Zvinhu zvekuita muSan Pedro de Alcántara
Guta reMalaga rine runako beach kwaunogona kunakidzwa nezuva negungwa. Saizvozvo, kune promenade angangoita makiromita mana kureba anobatana nePuerto Banús uye kwaunowana akawanda mabara uye maresitorendi ane akawanda ehupenyu.
Asi, kana iwe uchida kufamba, iwe unogona zvakare kuzviita pamwe neBoulevard kana kuburikidza neParque de los Tres Jardines. Uye pamusoro pezvose, une nzira dzinoyevedza dzekufamba musango muSierra Blanca. Semuenzaniso, iyo inokwira kuCruz de Juanar, ingangoita XNUMX metres kumusoro, uye iyo inokwira kuenda kuLa Concha peak.
Mamiriro ekunze muSan Pedro de Alcántara
Guta iri pamwe nenzvimbo yese yeMarbella zvine subtropical mediterranean ekunze, nechando chakanyorovera uye kupisa kwezhizha. Kunaya kuri kushomeka uye wepakati pagore tembiricha ndeye gumi nemasere degrees centigrade. Kune chikamu chayo, maawa ekupenya kwezuva pagore anoda kusvika zviuru zvitatu. Naizvozvo, chero nguva yakanaka kuti iwe ushanyire guta reMalaga, kunyangwe iwo akanakisa mwedzi ndeayo june naSeptember, kana mamiriro ekunze akanaka asi asiri kupisa semuna Chikunguru kana Nyamavhuvhu.
Chii chekudya muSan Pedro de Alcántara
Iyo gastronomy yenzvimbo ino haina kusiyana zvakanyanya kubva kune iyo yakasara yeCosta del Sol.Senharaunda yemahombekombe, madhishi ayo anobva pane hove nyowani. Kana iri yekugadzirira kwayo, kune maviri chaiwo madhishi aunofanirwa kuyedza. Imwe ndeye "hove yakagochwa.", iyo inotora anchovy, bhiza mackerel uye kunyange tsvuku mullet sechinhu chisina kugadzirwa. Uye imwe iyo iyo sardine skewer, iyo inogadzirirwa nekuiisa padanda uye kuigocha pamoto wemoto.
Gazpacho zvakare yemuno madhishi, the salmorejo uye ajoblanco. Iyo yekupedzisira isobho inotonhora ine mvura, mafuta omuorivhi, gariki, munyu, chingwa uye maamondi. Dzimwe nguva vhiniga inowedzerwawo kwairi uye inowanzo kudyiwa nezvidimbu zvevise kana mazambiringa. Kana zviri zvemaswiti, iwe unofanirwa kunhuvira makeke emafuta, iyo borrachuelos uye iwo ma roll ewaini.
Kune rimwe divi, mutaundi reMalaga mune nhamba huru yemahotera izvo kwete chete zvinokupa iwe yemunharaunda chikafu. Iwe unogona zvakare kuravira chikafu chekunze uye kunyange madhishi zvinoenderana neazvino gastronomy.
Mukupedzisa, pane zvakawanda izvo San Pedro de Alcántara inofanira kukupa iwe. Iwe haufanire kurasikirwa nemukana wekushanyira ino inonakidza nzvimbo muMalaga. Hapana chinofanira kudzikamisa kubva kune mamwe madhorobha ane mukurumbira kuCosta del Sol seMijas, nerja, Fuengirola, Benalmádena kana Torremolinos.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » San Pedro de Alcantara